Mahatoky jolay 2019 - FJKM Amparibe Famonjena
Jolay 2019 manatrika ny mino ny Tompo
Manatrika ny mino ny Tompo Tsianjery : Matio 18 : 20 : « Fa na aiza na aiza no iangonan’ny roa na telo amin’ny Anarako, dia eo afovoany Aho »
Endrey ny hatsaram-pon’Andriamanitra, ry Havana, fa mahatsapa ny fiasan’ny tanany mahery isika tamin’ny namenoiny antsika ny Fanahy Masina. Ka na aiza na aiza aleha, na amin’ny fotoana toa inona indrindra amin’ny zavatra rehetra atao, dia mahatsiarova hatrany ny fanatrehan’ny TOMPO JESOA. Eo anilantsika mandrakariva Izy. Mitondra fiadanana ho an’ny mino rehetra izany.
Ny fanatrehan’ny Tompo araka ny Testamenta Taloha
Hitantsika tamin’ny Testamenta Taloha fa rehefa hiatrika ny olony Andriamanitra dia mifidy olona manokana: toa an’i Mosesy (Eks 33:7). Tsy amin’ny toerana rehetra fa mifidy toerana manokana koa Izy izay voatokana sy masina. Miresaka mivantana amin’ny olom-boafidiny toy ny sakaiza.
Ny fanatrehan’ny Tompo araka ny testamenta vaovao
Fa ankehitriny kosa ao amin’ny fanekena vaovao, ny fanatrehan’i Jesoa Kristy Tompo dia amin’ny alalan’ny finoana sy ny fiasan’ny Fanahy Masina (Mat.18:20). Tsy amin’ny alalan’ny fahitana tahaka ny tao amin’ny testamenta taloha intsony izany.
Ny fifanatrehan’Andriamanitra sy ny olom-boavonjiny rahatrizay
Fa ho amin’ny fiainana mandrakizay kosa, hifanatrika mivantana amin’Andriamanitra sy ny zanak’ondry ny mino sy izay voavonjy (Apok 22:1-5) ; ary ny tavany no fahazavana ho an’ireo.
Andriamanitra dia manerana izao tontolo izao; raha alaintsika sary amin’izao fiainana ankehitriny izao izany dia toy ny hoe “satellite, vidéo surveillance . . . “ ka asakasak’izay sahy mangalatra, mandoto, manimba na manao izay tsy mety sy tsy azo atao. Mino izany fanatrehany izany ve ianao? Mahatonga anao hanao ny sitrapony ve izany finoanao izany ? Fa ho antsika kosa, ao amin’ny finoana an’i Jesoa Kristy, amin’ny alalan’ny Fanahy Masina, no ahitantsika sy ahenoantsika izany fanatrehany izany. Izay fatra-pikatsaka ny fanjakany sy ny sitrapony dia hisitraka tokoa izany fitahiana mahagaga izany, fa indrindra hahazo hery lehibe eo am-panatontosana ny irany. Meteza ary ho mpanaraka ny Tompo fa Izy dia momba sy mitantana izay rehetra mino Azy. Ny fiarahantsika lalana Aminy dieny ety an-tany no ahazoantsika antoka fa hifanatrika Aminy indray isika rehefa miala ety, satria isika mino fa ilay Kristy izay niakatra ho any an-danitra dia efa manamboatra toerana ho antsika. Ho an’Andriamanitra irery ny Voninahitra, Amen!